KU DHIIRI GELI QALINKA QORAAGA DA’DA YAR. | gobolada.com
KU DHIIRI GELI QALINKA QORAAGA DA’DA YAR.
Waxaa jira Qorayaal jiilka Cusub ah oo Hamigoodu yahay sidii ay hawlahooda Qoraanimo ay ugu horumarin lahaayeen Dalkooda iyaga oo Bulshadooda ugu adeegaya si mutadawacnimo ah, kuna dhiiri geliya dhalinyarada Soomaaliyeed in ay Qaataan Qalinka, kana Tagaan Qabyaalada iyo Qabiilka, kuwaas oo u istaagay Horumarinta Nabada iyo Dib u Dhiska Dalka.
Qorayaashaas oo wax ku bartey hab Casri ah iyo Aalado ka Caawiya kor u qaadida aqoontooda sida Internetka ayaa hanaanka ay wax u qoraan waxa uu yahay habka Casriga ah oo soo jiita akhriste kasta ama xiisa galiya in uusan ka Caajisin qofku waxa uu akhrinayo.
Qorayaasha da’da yar waxaa ku jira Sharma’arke Cabdi Xasan oo ka mid ah Qorayaasha boogga TAXANE, Wargeyska Aayahanolosha iyo Hormadii.
Qoraagan Dhalinyarada ah oo ku dhashey Magaalada Baledweyne oo ah Caasimada Gobalka Hiiraan taas oo 335KM u jirta Caasimada Muqdisho ayaa Waxbarashadiisii Dugsiga sare ku qaatey isla Magaalada Baledweyne Sanad Dugsiyeedkii 2014-2015kii.
Sharma’arke Waxa uu Sii Watey Waxbarashadiisii Isaga oo ka bilaabey Waxbarashadiisii Jaamacadeed Mid kamid ah Magaalooyinka dalkeena ee Loogu yeero Hoyga Tacliinta.
Qoraagan da’da yar Waa Shaqsi Jecel Waxbarashada iyo Qorida Taariikhaha waxa uuna ka qayb qaata Shirarka la Xiriira Waxbarashada iyo arimaha horumarinta Dalka.
Waxaan Jeclahay in la soo dhaweeyo Qorayaasha da’da yar ee uu kamidka yahay Sharmaarke iyo kuwa lamidka ah, laguna Dhiiri geliyo dadaalkooda iyo Hamigooda Qoraanimo, iyada oo lala garab istaagayo Taageero hiil iyo hagar la,aan ah oo dhiirigelin niyad ahi ku jirto.
Qorayaasha ayaa waxay Qayb ka qaadan karaan Wacyigelinta Bulshada, Nabada iyo Horumarka Dalka, marka ay Qalinka u adeegsadaan Wanaaga iyaga oo Diirada Saaraya siddiii ay Dalkooda ku Samata bixin lahaayeen.